တရုတ် ခေါက်ဆွဲကြော် | Wutyee Food House
« ကိုရီးယားထမင်းသုတ် (Bibimbap)
ကိုရီးယား ငါးရှဉ့်ကင် »
April 26, 2010 by chowutyee
တရုတ်ခေါက်ဆွဲကြော်ကို မနက်စာ၊ အစာပြေ၊ ညနေစာ အဖြစ် မိမိနှစ်သက်လို သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အရသာကောင်းပြီး အချိန်တိုတွင်း စားသုံးနိုင်တာမို့ ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါလိမ့်မယ်….
၁။ ခေါက်ဆွဲခေါက် – ထုပ်သေးတစ်ထုပ် (ရေနွေးအနည်းငယ်ဖျောပေးပြီး ဇကာဖြင့် ပြန်ဆယ်ထားပါ)
၂။ ကြက်သွန်ဖြူ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၃။ ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၄။ မီးနီ ပုဇွန် – ၅ကျပ်သား (အခွံနွာပါ)
၅။ ကင်ပွန်း – ၅ကျပ်သား (အတုံးလေးများတုံးပေးပါ)
၆။ ကြက်သား (သို့) ကြက်အူချောင်း – ၃ချောင်း (အစောင်းလေးများလှီးပါ)
၇။ ခရုဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၈။ ပဲငံပြာရည်အကြည် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၉။ ပဲငံပြာရည်အနောက် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၁၀။ သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၁၁။ ကော်ဖီထုပ် – လက်တစ်ဆုပ်
၁၂။ ပန်းကော်ဖီ – အနည်းငယ် (အတုံးလေးများလှီးပါ)
၁၄။ မုန်လာဥနီ – ၂ဥ ( အရှည်စောင်းများလှီးပါ)
၁။ ဒယ်ထဲ ဆီ ထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ များဖြင့် ဆီသပ်ပြီး အညှိရောင်သန်းသည်အထိ မီးနည်းနည်းဖြင့် ၂မိနစ် ကြော်ပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် (ကင်ပွန်း၊ ပုဇွန်၊ ကြက်အူချောင်း) များကို ထည့်ပြီး အရသာအပေါ့အငံ့အတွက် ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ သကြား ဒယ်ထဲသို့ ၂မိနစ်ခွဲ ခန့် အသားများ ကျက်သည်အထိ ထည့်ကြော်ပေးပါ။
၃။ ထို့နောက် ဒယ်ထဲ ခေါက်ဆွဲဖတ်များထည့်ပြီး ရောမွှေ၍ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပေးပါ။
၄။ ဟင်းရွက် (ပန်းကော်ဖီ၊ ကော်ဖီထုပ်၊ မုန်လာဥနီ)များကို ထည့်ပြီး ရောမွှေပြီး ၂မိနစ်ခန့် အဖုံးအုပ်ထားပြီး အရွက်များ နူးသည်အထိ တည်ထားပေးပါ။
၅။ စားလို့ကောင်းပြီး တရုတ်ခေါက်ဆွဲကြော်ကို စားသုံးနိုင်ပါပြီး…..
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 16 Comments
on April 26, 2010 at 4:30 am | Reply DOJ(Taw Ong Chan)
အရသာက ရိုးရိုး ခေါက်ဆွဲကြော်နဲ့ ဘယ်လိုကွာပါသလဲ???? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စားလို့ တော်တော်ကောင်းမယ့်ပုံပဲနော်… :)))
on April 26, 2010 at 5:39 am | Reply chowutyee
ဒီခေါက်ဆွဲကြော်က Hokkien Mee ခေါက်ဆွဲကြော် စတိုင် ကြော်ထားတာပါ။ Hokkien ခေါက်ဆွဲကြော်လို ခေါက်ဆွဲဖတ်က အ၀ါရောင် မဟုတ်တာက လွဲရင်၊ ထည့်ရမယ့် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက အတူတူပါပဲ… 🙂
on April 26, 2010 at 5:39 am | Reply Evy
စားကောင်းမယ့်ပုံဘဲဝတ်ရည်ရေ။ အဲလိုမျိုးကြော်တာ မစားရတာတောင်ကြာလှပေါ့
on April 26, 2010 at 5:43 am | Reply chowutyee
၀တ်ရည်က Hokkien Mee ခေါက်ဆွဲကြော် ကြောမလို့ပဲ။ ခေါက်ဆွဲ အ၀ါမရှိတာနဲ့ ရိုးရိုးခေါက်ဆွဲနဲ့ပဲ ကြော်လိုက်ရတာ… Thanks Ma Evy! 🙂
on April 26, 2010 at 9:03 am | Reply hmone
looking delicious and wanna eat and wt about trying to U-Don…it is nice as well
on April 27, 2010 at 2:24 pm | Reply chowutyee
U-Don နဲ့လည်း စားတော့ကောင်းမယ့်ပုံပါပဲ.. 🙂
on April 26, 2010 at 12:30 pm | Reply Ma Ei
Hokkien Mee က ခေါက်ဆွဲ ၂ မျိုး ကို ရောကြော် တာလား … ၁ မျိုး ထဲ ကို ပဲ ကြော်တာ လား…
မမအိ သိပ်မသိလို့ … သိရင်ပြောပြပါလား။
တချို့ ကပြောတော့နန်းကြီး လို အဖတ်ရယ် ၊ ဂျုံ ခေါက်ဆွဲ ဖတ် ရယ် ၂ မျိုး ကို ရော ကြော်တာ လို့ ပြောတယ်။
၀တ်ရည် သိရင် မမအိ ကို ပြောပြပေးပါ။
on April 27, 2010 at 2:39 pm | Reply chowutyee
မမအိရေ.. Hokkien Mee က ခေါက်ဆွဲ ၂မျိုးရောကြော်တာပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ခေါက်ဆွဲအဝါအလုံး ၊ ဆန်ဂျုံခေါက်ဆွဲဖတ် ( မြီးရှည်အဖတ် ) ရောကြော်တာပါ။ ပဲပင်ပေါက်၊ ကြက်ဥတို့ပါ ထည့်သေးတယ်။ 🙂
on April 26, 2010 at 12:41 pm | Reply aungyezaw
အစ်မ၊ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာက ခေါက်ဆွဲခြောက် အထုပ်ကြီးတွေပဲရှိတာ၊ အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့က ပြုတ်ပြီး ရေအေးထဲပြန်စိမ်တယ်။ အဲ့လိုလုပ်ရတာ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး။ ရေနွေးဖျောရုံပဲဆို နူးပါ့မလားမသိဘူး။ စမ်းတော့မကြည့်ရသေးဘူး။
on April 26, 2010 at 12:49 pm | Reply hmone
i m not expert like wut yee…but i cookedalot of fried noodles too so i just want to give some advice that how i normally do….i normally put some hot water full cover to that noodles and leave for about 10 minutes and boil until it become ready and filter the noodles and pour the cold water to that noodles…
on April 27, 2010 at 2:29 pm | Reply chowutyee
Ko Aung Ye Zaw, ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ရေနွေးဖျော်ဆိုတာ ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူဆူနေတဲ့ အထဲကို မိနစ်ဝက်ခန့် ထည့်ပြီး ပြန်ဆယ်တာကို ပြောတာပါ။ ဒါပေမယ့် ခေါက်ဆွဲ အလုံးကြီးတာ၊ သေးတာနဲ့လည်း အချိန်က ကွာမယ်ဆိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အနေထားရောက်ရင် ပြန်ဆယ်ရုံပါပဲ… စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုန်း… 🙂
on April 27, 2010 at 3:32 am | Reply Moe Thaike
on April 27, 2010 at 2:35 pm | Reply chowutyee
Ma Moe Thaike, ကျေးဇူးပဲနော်။ ကိုးရီးယားထမင်းသုပ်က ပုံမှန် အမဲသားနဲ့ သုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀က်သားနဲ့လည်း စားကောင်းမှာပါ အစ်မ 🙂
on November 29, 2011 at 12:40 pm | Reply A Hnin
တုံယမ်း ဟင်းနှစ် လုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါအုံးနော်…………..
on March 28, 2012 at 8:00 am | Replyိမို့မို့
ညီမလေးဝတ်ရည်ရေ ခေါက်ဆွဲကြော်ကို ညီမပြောသလိုပါပဲ အိမ်မှာကြော်တာ..ဆိုင်က ၀ယ်တဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်နဲ့ အနံ့မတူလို့ ဆိုင်ကြော်နဲ့တစ်ထပ်တည်း အနံ့မတူတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။
on March 28, 2012 at 3:46 pm | Reply chowutyee
အနံ့မတူတာက ချက်နည်းမတူလို့ပါ မမို့။ 🙂